VBSW စွမ်းအားမြင့် ကျောင်းသား စစ်သည်တော်အဖွဲ့အား ပြည်တွင်းတွင် ဗုံးခွဲရန် စေလွတ်လိုက်ပြီ ~ YaWai (ပိုင်စိုးသူ)
VBSW စွမ်းအားမြင့် ကျောင်းသား စစ်သည်တော်အဖွဲ့အား ပြည်တွင်းတွင် ဗုံးခွဲရန် စေလွတ်လိုက်ပြီ
Postado Tuesday, December 4, 2012 at 4:56 AM
KIA တပ်ချုပ်က ကေအိုင်အို ဒုဥက္ကဌ ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ ကုလား ၈၀ တာလီဘန် ၈ ယောက် နဲ့ ဂေါ်ရခါး တပ်ရင်းဖွဲ့တယ်စည်းခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ် "၀" တပ်ဖွဲ့တွင်လည်းခေါင်းဆောင် ပိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်တစ်ဆက် ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ သဘောထား မသိရသေးချိန် ဝ ခေါင်းဆောင်တစ်ချို့တရုတ်လွတ်တော်ကို တတ်ခဲ့တယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ခဲ့တယ် ။
ဒီကြားထဲ ဦးအောင်မင်း ပြုတ်မယ်ဆိုတဲ့ ဂယက် ကြောင့် ယူထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့တွေကလည်း ခပ်လှုပ်လှုပ်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ပွဲဆူဆူဖြစ်နေ ချိန်တွင် ခံလိုက်ရသူများမှာ ဖွါစုတ်သွားတာ အညတရ တွေပါ။
အဲဒီလို ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဟိုယောင် ယောင် ဒီယောင် ယောင် လုပ်နေသော ၈၈ အဖွဲ့များ မှာလည်းဒေါသတွေထွက် စာရွက်တွေကိုင် တတ်လာတာက မီးပူကော့နေအောင် ထိုးထားတဲ့ စတပ်လက်ရှည်ဝတ်တွေ ပြီး ပြည်သူတွေကို မြှောက်ပေးခဲ့ပါတယ် ။
KIA တပ်ဖွဲ့တွင်လည်း တပ်ရင်း အသစ်များ ဖွဲ့စည်းက ဂေါ်ရခါး တပ်ရင်း ဟုအမည်ခံကာ ဘင်္ဂလီတပ်ရင်း များ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။၄င်း အဖွဲ့တွင် ပါကစ္စတန်နဲ့အာဖဂန်မှာလေ့ကျင့်ပေးထားသည့်ဖောက်ခွဲရေး ကျွမ်းကျင်သူ အင်ဂျင်နီယာဆိုသူ သင်တန်းဆရာအများစုပါကြောင်း ။
မွတ်ဆလင်ကုလားများမှ ကေအိုင်အေ ၃၀ဦးအား အထူးဖောက်ခွဲရေး သင်တန်းပေးလျက်ရှိကြောင်း လည်း သိရှိရပါတယ်။ကေအိုင်အေ တင်မက ABSDF မြောက်ပိုင်း က လက်ရွှေးစင် ကျား ၇ ဦး မ ၂ ဦး နဲ့ VBSWစွမ်းအား မြှင့် မြန်မာ ကျောင်းသားများ စစ်သည်တော် အဖွဲ့ က လက်ရွှေးစင် ၁၀ ဦးတိတိ တို့လည်း ဖိတ်ကြားပြီး ၅ ရက်ကြာ လျို့ဝှက် စုစည်းခဲ့ပါတယ် ။
KIA တပ်ဖွဲ့များသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရေးကိစ္စများ အားလုံး ရှုပ်ထွေးနေချိန် တွင် လျှို့ဝှက် အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းကာ ပြည်တွင်းနေရာအချို့တွင် ဗုံးခွဲရန် ကြံစည် နေကြောင်း အတွင်း သတင်းမှ ကြားသိ ရကြောင်း..လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်ခန့်က ပဲခူးတိုင်း၊ တောင်ငူမြို့ အနီးရှိ မီးရထား လမ်းတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ထိုဗုံးခွဲမှုတွင် လည်း KIA နှင့်
ထို စွမ်းအား မြှင့် မြန်မာ ကျောင်းသားများ စစ်သည်တော် အဖွဲ့သည် နှင့် ပူးပေါင်းဆောင် ရွက် ခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက် နိုင်ငံတွင်း နေရာ အနှံ့အပြား တွင်လည်း ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်ရန် လှုံဆော် နေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။အထူးသဖြင့် ဆန္ဒပြလူထုရှိရာနေရာ နှင့် ဆန္ဒပြလူထု စုဝေးရာနေရာများ အပြင်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တို့၏ နေအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်များ ဟု သိရှိရသည် ။
ရန်ကုန် မန္တလေး တောင်ငူ ပြည် မကွေး မော်လမြိုင် တောင်ကြီး စစ်ကိုင်း မုံရွှာ တို့ရှိ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ များ တည်ရှိရာ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် Happy News Year ညများတွင် စတင်ရန် (D)day သတ်မှတ်ထားသည် ။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ၏ သဘောသကန်ကို နားလည်သဘော ပေါက်ရန် အတွက် အချက်အလက်များ စုဆောင်း၍ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာကြာ လေ့လာခဲ့ပါတယ်။တွေ့ရှိရသည်မှာ ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများအပေါ် အတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းများမှာ စစ်တပ်အပေါ်တွင် အပြစ်ပုံချလေ့ ရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ အတိုက်ခံများက စစ်တပ် နှင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတတို့အား တဖက်သတ် စွပ်စွဲလေ့ရှိသည်ကိုလည်း သာမန်ပြည်သူများက သဘော ပေါက်ထားသည်။
Copy From Myanmar Daily Star Group Blog Page
ကောင်လေးက သူ့ချစ်သူကောင်မလေးဆီ sms ပို့လိုက်တယ် … Boy ။ ။ Hi Baby!! .. နေကောင်းရဲ့လား?? ငါတော့ ဒီနေ့ အရမ်းပျော်နေတယ်!! Girl ။ ။ နေဦး, ခဏ...
KIO တပ်စခန်းများအား လက်နက်ကြီး ပစ်ကူအပြင် စစ်ရဟတ်ယာဉ်များ သုံးစွဲ တိုက်ခိုက်
မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် (မပခ) တိုင်းမှူး၏ သတိပေးစာ ပေးပို့ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း အစိုးရဘက်မှ ကချင် လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တပ်စခန်းများ...